Fiangonana METM : Kianin’ireo taranaky ny mpanorina ny birao foibe
On mar 22, 2018 849
Na dia namoaka ny didy fanakatonana ny fiangonana METM etsy Antohomadinika aza ny lehiben’ny prefen’ny polisy eto Analamanga dia tsy mbola vita akory ny raharaha. Namory ny mpanao gazety tetsy amin’ny hotely Carlton, Anosy ireo taranaky ny Pasitera Rakotobe Andriamaro, anisan’ny angady nananana sy vy nahitana ny fiangonana.
Nitondra fanankianana ny fomba fitantanana ataon’ny foibe izy ireo. Indrindra eo amin’ny fiainana anatin’ny fiangonana. » Tsy anjaran’ny foibe no mampiato ny mpitandrina. Masi-mandidy amin’izany ny mpandray ny fanasan’ny tompo rehefa mahafeno ny fetr’isa 80 mahery. Tsy nohajaina izany fa ny nahamaika dia ny fanakatonana ny fiangonana sy fihazakazahana namonjy ny fitsaran’olombelona », hoy izy ireo. Nanipazany teny ihany koa ny fitantanana amin’ny fiangonana any ivelan’Antananarivo sy any amin’ny faritany.
Marihina fa solombavabahoaka ankehitriny no anisan’ny mpikambana ao amin’ny birao foiben’ny METM. « Sata izay tsy azo ampivadiana amin’ny asan’Andriamanitra araka ny lalana mifehy ny fiangonana METM manokana. Tsy mahazo manao politika na ampivadiana amin’ny politika ny andraikitra ao amin’ny birao fitantanana. », hoy hatrany izy ireo.
Manaitra ny sain’ny tompon’Andraikitra izy ireo tsy ho sodokan’ny lainga tsara lahatra ka tsy hanao sorona ireo mpino an’arivo na aman’alina.
Isorana-Isandra : Nampiantrano ny andro iraisam-pirenena ho an’ny rano
Lois électorales : Troisième session extraordinaire des parlements